Hubka suuqa madoow loo soo galiyo Iswiidhan oo kor u kacey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hubka suuqa madoow loo soo galiyo Iswiidhan oo kor u kacey
Publicerat onsdag 25 maj 2011 kl 13.29
Siyaabaha lagu helo hubka sharci daradaa ayaa kor u kacey dalkaan Iswiidhan sida ay ciidamada booliisku sheegeen.
Ilaa sanadkaan gudihiisa ayey ciidamada turubataariyada ama canshuuraha dalkaani waxay qabteen 12 xaboo hub ah .
Dad danbiilayaal ah ayaa bilooyinkii u danbeeyey waxay marar badan xabado ku fureen wadooyin ku yaala magaalooyinka Göteborg iyo Malmö, booliiskuna waxay sheegeen in dhacdooyinkaas ay sabab u tahay hubka sharci daradaa oo si sahlan loo heli karo inkasta oo booliisku aysan ka warheeyn tirada guud ee hubkaas sharci darada ah.
Ciidamada dalkaan u qaabilsan ka hortagga danbiyada ayaa sheegey in saddexdii sanoo u danbeeysey la qabtey qiyaastii 850 hub sharci daro ah,waxaasa loo maleeynayaa in tirada hubkaas sharci darada ahi uu intaas ka badan yahay.
Booliiska ayaa intaas ku darey in ay adag tahay in la kashifo hubka dalkaan lagu soo galiyo hab suuq madoow ah maadaama hubkaas badankiisa dhanka dhulka looga soo gudbiyo dalalkaan dalalka xubnaha ka ah midoowga yurub ,markii hubkaas la soo galinayana isagoo qeeybo yar yar u furfuran la soo gasho.